कम खर्चमा कसरी घर धान्न सकिन्छ ! - Everest Talk
कम खर्चमा कसरी घर धान्न सकिन्छ !1 min read
पछिल्लो समय महंगी बढेको छ । महंगीको अनुपातमा कमाइ बढेको छैन । कम खर्चमा घर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
२०७६, २५ माघ शनिबार १०:२३
in खबर, टिप्स, समाज
पछिल्लो समय महंगी बढेको छ । महंगीको अनुपातमा कमाइ बढेको छैन । कम खर्चमा घर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर यो बाध्यताका बीच पनि धेरैलाई कम खर्चमा घर धान्न निकै गाह्रो भइरहेको छ ।
यो नेपालीहरूको मात्र समस्या होइन, अन्तराष्ट्रिय स्तरमै कम खर्चमा घर चलाउनेहरू धेरै छन् । यो जताततैको समस्या हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले पनि कम खर्चमा घर धान्न सकिने टिप्पणीका बारेमा चर्चा गरेका छन् । आखिर कम खर्चमा कसरी घर धान्न सकिन्छ त ? आउनुहोस् यही विषयमा चर्चा गरौँ –
१. आम्दानीको स्रोत र खर्चका शीर्षकहरू पहिल्याउनुहोस् । कहाँबाट कति आम्दानी हुन्छ र कहाँ कति खर्च हुन्छ भन्ने मोटामोटी हिसाब गर्नुहोस् । भैपरी आउन सक्ने कामहरूलाई पहिलानै पहिल्याउनुहोस् ।
२. थोरै भएपनि बचतको भाग छुट्याउनुहोस् । तपाईँको कमाइ १०,००० मात्र मासिक छ भने पनि खर्च कटाएरै केही रकम जोगाउनुहोस् । यसले भैपरी आउँदा तपाईँलाई सहयोग गर्छ ।
३. तिर्नुपर्ने ठाउँमा पैसा तिरिहाल्नुहोस् । यसले खर्चको बोझ केही हदसम्म कम गर्छ । लिनुपर्ने ठाउँमा पैसा पनि लिइहाल्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
४. नियमित कमाइभन्दा बढी पैसा कतैबाट आइहाल्यो भने त्यसलाई ’आकस्मिक कोष’ बनाएर राख्नुहोस् । यसले तपाईँलाइ कुनै दुर्घटना वा केही अरू काम पर्दा सहयोग गर्छ ।
६. सकेसम्म विमा गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाइ बचत गर्न पनि सिकाउँछ भने अर्कोतर्फ तपाईंको सुरक्षा पनि हुन्छ । कुनैपनि काम सकेसम्म थोरै खर्चमा गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । किनमेल गर्न जाँदा बार्गेन गर्न जान्नेसँग जानुहोस् । नेपालको हकमा कुनै पनि सामानमा बढी मार्जिन राख्ने चलन छ । बुझेर मात्र कुनैपनि सामान किन्नुहोस् ।
७. काम गर्दा बरु बरू केही रकम थोरै नै किन नहोस् समयमै तलव दिने ठाउँमा काम गर्नुहोस् । व्यापारको हकमा लिनुपर्ने ठाउँमा पैसा महिनाको केही दिन अघिसम्म उठाइ सक्नुहोस् । यसका लागि केही अतिरिक्त समय निकाल्नुपर्यो भने पनि निकाल्नुहोस् ।
९. बालबच्चाको शिक्षाका लागि योजना बनाउनुहोस् । बच्चाको स्कुल वा कलेजमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समयमै बुझाउनुहोस् । बच्चा १८ देखि २१ वर्षको उमेरमा पुगेपछि उनीहरुको शिक्षाका लागि त्यस समयमा कतिसम्म खर्च जोहो गर्दा सही होला भनेर आँकलन गर्नुहोस् ।
१०. रमाइलो गर्ने नाममा धेरै पैसा खर्च नगर्नुहोस् । धेरै रमाइलो गर्ने साथीको संगत छ भने पैसा चलाउन आफ्नी जीवनसाथीलाई दिनुहोस् । अविवाहितका हकमा आफ्नो परिवारको कम खर्च गर्ने साथीलाई पैसाको जिम्मा दिनुहोस् । यसो गर्दा आफूसँग केही पैसा राख्न भने नबिर्सिनुहोस् ।
Tags: कम खर्चघर धान्न
प्रदेशको विरोधपछि उल्टियो सरकारको निर्णय, भोलि र पर्सि उपत्यकाबाहिर जान नदिइने
२०७६, २७ चैत्र बिहीबार १८:२७
चोरी भयो भायनेटका १ लाख ७० हजार ग्राहकको विवरण
२०७६, २७ चैत्र बिहीबार १४:२१
रसुवागढी नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीन मानेन
२०७६, २७ चैत्र बिहीबार १३:२५
वैशाखदेखि लागु हुनेगरि बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
२०७६, २७ चैत्र बिहीबार १३:१३
लकडाउन: अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाइने
लकडाउनमा यी उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने